IMacOS 8, iOS kunye ne-iPadOS 11.3 beta 14.5 yabaphuhlisi | Ndisuka mac
Iinguqulelo ezintsha ze-beta zisungulwe izolo emva kwemizuzu nje emva kweendaba ezisemthethweni zentetho eza kwenziwa ngu-Apple eApple Park ngo-Epreli olandelayo. Ezi nguqulelo ze-beta zifikelela kuguqulelo 8 kwaye zimbalwa izihlandlo esizibonileyo zihamba ukuza kuthi ga ngoku ngokweenguqulelo ...
Siyaqonda ukuba iApple iyayandisa ukwazisa ngokusesikweni ngenxa yokusilela okunye kwaye kunokwenzeka ukuba ucoceke kwi-betas la I-WWDC iza kubanjwa ngoJuni olandelayo ikwafumaneka nesiqinisekiso esisemthethweni semini nexesha.
Into elungileyo malunga nezi nguqulelo zikhutshiweyo yile ukhuseleko kunye nokuphuculwa kozinzo kuyongezwa, ekucingelwa ukuba yakuba i-OS eyahlukileyo isungulwe ayifanelanga ukuba neengxaki okanye ukungasebenzi kakuhle. Ke xa zisungulwa zinakho ukufumana ingxaki encinci kodwa ithiyori kufuneka zipolishwe kakhulu nge-beta engaka.
Umhla osemthethweni esiya kuthi sibe nazo ezi nguqulelo zifumaneke kubasebenzisi abangenayo i-betas efakiweyo awaziwa, kodwa ukusuka kweziphi izimvo ezahlukeneyo zosasazo, inokuba kukuqala kuka-Meyi. Kwelinye icala, abasebenzisi abaneenguqulelo ze-beta i-iOS, i-watchOS, i-iPadOS, i-tvOS kunye Ngokwethu sine-macOS beta yokuvavanya, Sinokuthi akukho ngxaki ziphambili okanye ukusilela. Siyaqonda ukuba lincinci ixesha elishiyekileyo lokubona iinguqulelo zeRC kwaye ezi zokugqibela, siza kubona ukuba kuthatha ixesha elingakanani ukuzazisa.
Njengamaxesha onke kwezi meko ingcebiso yile lindela uguqulelo lwe-beta yoluntu ukuba lubekhona ukuze lufakelwe kwaye ukuba unesigulana esincinci, shiya ii-betas zabanye kuba nangona kuyinyani ukuba basebenza kakuhle, banokwenza ukungangqinelani nesixhobo okanye ukuba ne-bug ecaphukisayo, yile nto ibetas ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » IMacOS 8 iBeta 11.3, iOS, kunye ne-iPadOS 14.5 yaBaphuhlisi